Chii chakakosha mari yekudyara? | Ehupfumi Zvemari
Chii chakakosha mari yekudyara?
Mazuva ano tiri kuona kuti chimwe chezvigadzirwa zvemari zviri kubuda zviri izvo zvinonzi kukosha mari yekudyara. Asi isu tinonyatso kuziva here kuti iyi nyowani maitiro ekudyara zvinoreva? Nekuti zvirizvo, izwi reAnglo-Saxon rakabatanidzwa nesimba guru mubato rezvemari uye pamwe risingazomboendizve. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuziva kuti chii uye kuti unogona sei tora mukana uyu maitiro. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti zvinogona kukubatsira kukwidziridza mari kubva ikozvino.
Kana iwe uchigara uchiteedzera yakasarudzika yekutaurirana midhiya unenge waona kuti kwemwedzi mishoma izwi kukosha kwave kuiswa mune iyo mutauro wezvigadzirwa zvemari uye kunyanya iyo yemari yekudyara. Mazhinji mamodheru anga achionekwa mumwedzi yapfuura iyo inochengetedza hunhu uhu, iyo inosanganisirwa mukati meiyo kukosha. Vazhinji vevashambadzi vadiki nepakati vari kuwedzera kuziva zvavanomiririra nhasi
Huye, kukoshesa mari yekudyara yakarongedzwa pasi peinonyatso tsanangurwa mari yekudyara uye zvinodikanwa kuti iwe uzvizive kubva panguva ino chaiyo. Chekutanga pane zvese, zvinoreva mukana mutsva wauchazofanira kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kusvika paanogona zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Iko kwaunogona kusarudza aya emhando dzekudyara pamusoro pemamwe mari emhando dzakasiyana: kusiyanisa, yakatarwa, mari, yakavhenganiswa mari kana chechero kumwe kurongeka. Ichi ndicho chimwe chezvazvino zvigadzirwa zvinopihwa nemisika yekudyara.
1 Koshesa mari yekudyara: ndezvipi?
2 Tiine zvikwata zvehunyanzvi
3 Iyo fashoni yemari inokosha
4 Zvinhu zvinoongororwa
5 Chii chiri kukosha kwemari chiri kutsvaga?
6 Mhando zhinji dzinobatsira
Koshesa mari yekudyara: ndezvipi?
Iyi kirasi yezvinhu zvakasarudzika zvemari zvigadzirwa ndeimwe nzira yekudyara inozivikanwa nevamaneja vayo vanoisa mari mumakambani anosangana nezvinokosha uye zvakakosha zvinodiwa uye izvo hazvisi zvimwe kunze kweizvo zvinotorwa kubva pamisimboti yekukosha kudyara. Mune mamwe mazwi, izvo zvakajairwa kunzi kudyara mukukosha. Izvi zvinorevei chaizvo? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka pakutanga kuona sevaya vanogona kugadzira yepamusoro purofiti ipfupi, yepakati kana yakareba. Nesimba misiyano zvine chekuita nemamwe manejimendi mamodheru.
Chero zvazvingaitika, makambani aya anofanirwa kusangana nezvakawanda zvinodiwa kuti zvionekwe sekukosha, uye pane zvimwe zvakakosha ndezve izvo zvatinozivisa pasi apa:
Mamiriro ekutanga avanofanira kupa ndeyekuti iwo makambani nemakwikwi zvakwakanakira uye kuti iri dudziro inovaratidza pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga.
Kana paine chimwe chinhu chinosiyanisa iri kirasi remakambani, imhaka yekuti akanyorwa pazasi pekukosha kwavo uye semhedzisiro yechiitiko ichi mumisika zvinogona kutaurwa kuti zvakachipa. Mune mamwe mazwi, ivo vane yepamusoro yekuongorora mikana inogona kupfuura vamwe. Neiyi nzira, iwe uchagara uri muchinzvimbo chekuburitsa yakakwira mari mibairo pane iya yakagadzwa mune kumwe kuchengetedzeka pamisika yemari.
Tiine zvikwata zvehunyanzvi
Imwe pfungwa inosunganidzwa zvakanyanya nemakambani ekukoshesa ndeyekuti vanofanirwa kugara vachipa rakanakisa manejimendi timu. Sezvawakatoona, imwe yei nuances yekudyara mumusika wemasheya ndeyekuti kambani yakanyatsogadziriswa kubva kwayakatungamira. Mupfungwa iyi, zvakajairika kune avo vane nyanzvi dzakanakisa uve nehunhu hwakanaka kwazvo mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti ichi chinhu chinogona kunge chine firita ine simba kwazvo uye inoshanda kuitira kuti iwe ugone kusimudzira mari dzako kubva ikozvino. Hazvishamisi kuti haasi makambani ese akanyorwa akafanana nekuremekedza chikamu ichi.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kuisa mari mukukosha, kana kuti chii chakaenzana mukukosha, kunogona kuva mubatsiri wechokwadi wako kuongorora izvo zvichave zviri chikamu chenyu chinotevera chekudyara portfolio. Kwete pasina, iwe uchatonga kunze akateedzana ezvemusika wemusika zvirevo zvisingasvitse izvi tarisiro neimwe nzira. Sezvo nekudyara murudzi urwu rwehomwe, iwe unozokurudzirwa nevezvekudyara nyanzvi avo vane hunyanzvi vakazvipira kuita chinangwa ichi chinodikanwa nevose vamiriri vemari. Usakanganwa izvozvo tsvaga kukosha Icho chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya kune chero yemari murevereri.
Iyo fashoni yemari inokosha
Ihwo hunhu huri kuwedzera uye kune vatove varimari vashoma nepakati varimari vanoda kirasi iyi yemari yekudyara zvine hunhu. Nekudaro, kumwe kushoropodza kunobva kune mamwe mazinga muhutungamiriri izvo zvinoita kuti munhu wese afungisise kuti ozvinyorera here kana kuti kwete. Semuenzaniso, kushoropodzwa kwakatorwa kubva kuchokwadi chekuti kukosha kwayo uye simba rekudyara pamakambani madiki akanyorwa anogona kukonzera matambudziko emari. Ichi chiitiko chekutanga chaunogona kuwana kubva ikozvino zvichienda mberi. Kuti uzvibvunze kana iwe uchifanirwa nekugadzwa kwerudzi urwu rwemari yekudyara iyo yakakosha uye panguva imwechete isinganetsi.
Kune rimwe divi, chimwe chikamu chekutarisa kubva zvino zvichienda mberi ndechekuti varimari vadiki nepakati havana imwe sarudzo asi kuti vanzwisise manejimendi ukoshi ine nguva yakakurudzirwa yekutora nguva. Sezvinei, pakati pemakore mashanu negumi uye mune chero mamiriro ezvinhu akakwirira kupfuura ayo anoratidzwa nemamwe echinyakare kana akajairwa masimendi mari Mupfungwa iyi, inogona kushanda semubatsiri anoshanda kuita mushe mushe wepotefolio uye netarisiro yakanaka yekuwana kuita kukuru pamusoro pemakore. Hapana mamiriro ekukurumidza kushanda kana kwenguva pfupi yenguva.
Kuti uone kukosha uku, zvinodikanwa kudoma nhevedzano yezvinhu zviri pamusoro pevanoongorora zvemari. Semuenzaniso, izvo zvakatorwa kubva munzira iyo maneja wega anochengeta kana kushanda pane izvo kukosha kukosha uye uye kunomiririra. Izvo zvakakosha zvakanyanya mupfungwa iyi kuongorora zvakadzama kuvapo kana kwete kwemikana mumusika. Kunyanya mune makuru makuru kusagadzikana kana kusagadzikana mumisika yemari. Nekuti, pakati pezvimwe zvikonzero, ivo vanogona kumiririra chaiwo mabhizinesi mikana chero nguva yakapihwa. Neyezve inogara ichigutsa uye inogutsa kudzokorodza kupfuura mune mamwe masheya esposheni.
Kune rimwe divi, kukosha mari yekudyara inobatsira zvakanyanya kana ichinongedzerwa kune iyo yakareba uye iri equity value mari. Nemasikirwo anogona kuve akasiyana kwazvo sezvo achigona kugadzirwa mune rakakura Ibex makumi matatu nematanhatu uye izvo zvinotarisa kudyara mumakambani madiki kana epakati-emari, kunyanya muSpanish Inoenderera Musika. Asi zvakare kubva kune mamwe masheya indices kubva chero kupi pasirese kusiyanisa mari yekudyara nenzira yakapfava uye yakaenzana.
Chii chiri kukosha kwemari chiri kutsvaga?
Uyu mubvunzo unobvunzwa nevashambadzi vadiki nepakati vanozvibvunza kazhinji uye izvo zvinoda kujekeswa kuitira kuti vagone kuvandudza mari yavo nenzira kwayo kubva zvino zvichienda mberi. Zvakanaka, pamusoro pezvose kusvika kumabhizinesi anonzwisisika, aine tarisiro yakanaka, kunyanya nechikwereti chakaderera uye, kunyanya uye chii chakanyanya kukosha kune vashandisi, kuti vatakure mutengo unokwikwidza wekutenga. Zvekuti mune yakati wandei kana zvishoma zvine musoro nguva inogona kubatsira uye kuwana yakajeka mibairo muhomwe yemari.
Nepo pane zvinopesana, chikamu chakanaka cheaya matsva emari ekudyara akaratidzira kugona kwavo kuburitsa yakanakisa kwenguva yakareba purofiti mumusika wemari. Kunyanya mari yekudyara yakabatana nemusika wekutengesa uye kunyanya iyo yeSpanish. Nenzvimbo dzekupindirana dzakakwira kupfuura idzo dzinopihwa nemamwe mafomati mukirasi ino yezvigadzirwa zvekudyara. Chinhu chinofanirwa kukosheswa pamusoro pedzimwe mhando dzehunyanzvi hwekufunga.
Mhando zhinji dzinobatsira
Imwe yemari yekudyara iyo parizvino inoratidza mashandiro ari nani pane mamwe ese ndiyo inodyara mu Spanish mari uye Portugal. Tichiverenga kuchengetedzwa nesarudzo huru yekudzora mumwedzi iri kuuya, senge, semuenzaniso, makambani senge Naturgy (Natural Gasi), Repsol uye Nokia Gamesa. Iyo ingori imwe yedzimwe sarudzo idzo dzepakati nepakati vatyairi vanogona kusarudza kana ivo vachida kutora mukana nezvezvakasiyana hunhu hweayo anonzi kukosha mari yekudyara.
Kune rimwe divi, zvakare kufunga nezve chokwadi chekuti chigadzirwa chemari ichi chakagadzirwa senzira yekudyara iyo inopa yakanakisa mhedzisiro yenguva refu. Uye mune ino pfungwa unofanirwa kuvanzwisisa, asi uchiratidza kuti imari inotakura nenjodzi dzayo uye nekudaro unofanira kuvaongorora kubva panguva yavanobhadharwa. Muchirevo chechinyorwa ichi, zvinovakirwa pakutorwa kwemidziyo nemutengo uri pasi pehunhu hwavo hwemukati. Hazvishamisi kuti iyi ndeimwe yemasanhu makuru kwainoshanda uye nekudaro iwe unofanirwa kufungidzira nzira dzekuita kuchengetedza kunobatsira kubva chero nguva uye mamiriro. Izvi zvinonyanya kana kushomeka kunozivikanwa nemari yekudyara inozivikanwa sekukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chakakosha mari yekudyara?
Musiyano uripo pakati pekuvhura rezinesi uye rezinesi rekuita
Iyo Dow Jones panguva dzese-dzakakwirira